Xildhibaano katirsan Galmudug oo ka walaacsan dagaalka Xeraale – Kalfadhi
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Maamulka Galmudug ayaa ka walaacsan xaaladda degaanka Xeraale ee Gobalka Galgaduud kadib dagaal culus oo shalay iyo habeen hore ka dhacay degaanka.
Xubnahaan oo la hadlay Kalfadhi ayaa nasiib darro ku tilmaamay xaaladda degaanka ee dagaalka ah waxayna ka tacsiyeeyeen dadkii ku dhintay, iyagoo Caafimaad u rajeeyay dadka kale ee dagaalkaasi ku dhaawacmay.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Xuseen oo katirsan Xubnaha Baarlamaanka Galmudug ayaa Kalfadhi u sheegay in colaadaasi ay ka dhalan karto cawaaqib xun khasaarahana uu intaas ka badan karo hadii aan xal deg deg ah loo helin.
“Waxaan ku baaqayaa in colaadda Xeraale la joojiyo, dadka dagaalamaya waxaan ugu baaqayaa in ay wahadal ku dhameeyaan tabashadooda”, ayuu yiri Xildhibaan C/raxmaan Xuseen oo katirsan Xubnaha Baarlamaanka Galmudug.
“Colaadaan muddo ayey soo taagneed, muhiimadii ay la hayd in la xaliyo lama siinin, hada waxaan ku talinayaa in laga fekero sidii loo dhameyn lahaa colaadda Xeraale”, ayuu yiri Xildhibaan C/raxmaan Xuseen oo la hadlay Kalfadhi.
Garaad Yuusuf Maxamuud oo sidoo kale katirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ayaa Kalfadhi u sheegay in dagaalkaan ay gayd fadhi u yihiin Siyaasiin iyo Madaxd katirsan Galmudug gaar ahaan Xubnihii Ahlusunna ee la midoobay Galmudug.
Xildhibaanka ayaa sheegay in Aduun iyo Aakhiro dambi iyo dhibaato laga dhaxlayo dagaalada ka socda Xeraale kuwaas oo sababay dhimashada dad ka badan 40 qof oo ay shacab ku jiraan.
“Dagaalka Xeraale waxaa ka dambeeya dad dano gaar ah ka leh, ma aqaan waxa laga faa’idayo daadinta dhiigga shacabka, balse waxaan ku baaqayaa in la joojiyo dagaalka”, ayuu yiri Xildhibaan Garaad Yuusuf oo katirsan Baarlamaanka Galmudug.